Fa maninona no mitahiry ranomandry? Ny rafitra fitehirizana ranomandry dia mampiasa ranomandry amin'ny fitehirizana angovo hafanana. Amin'ny alina dia mamokatra ranomandry ny rafitra mba hitehirizana ny fampangatsiahana, ary mandritra ny andro dia mamoaka ny fihenan-tsakafo izy ireo hamaly ny fangatahana herinaratra avo indrindra. Ny rafitra fitehirizana ranomandry dia misy singa mangatsiaka rano, tilikambo mangatsiaka, mpanondrana hafanana, rano ...Hamaky bebe kokoa »
Aza manao serivisy na eo akaikin'ny mpankafy, motera, na kapila na ao anaty ilay singa raha tsy mahazo antoka aloha fa tapaka, mihidy ary mivoaka ireo mpankafy sy paompy. Hamarino raha toa ka napetraka tsara ny fitondra môtô mpankafy mba hisorohana ny be loatra amin'ny maotera. Misokatra sy / na sakana lentika ...Hamaky bebe kokoa »
Gao Jin, Tale Jeneralin'ny Departemantan'ny Fiovan'ny toetrandro, dia nilaza fa ny herin'ny karbonina ao Shina no tena mamatotra ny karbaona dioksida ankehitriny. Ny dingana manaraka dia ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny HFC, ary hanitatra azy ireo tsikelikely amin'ny entona entona tsy karbonina hafa rehetra. Hydrofluorocarbons (HFCs), tafiditra ...Hamaky bebe kokoa »
Ny condenser etona dia mihatsara kokoa avy amin'ny tilikambo mangatsiaka. Ny fitsipiky ny fiasan'izy io dia mitovy amin'ny an'ny tilikambo mangatsiaka. Izy io dia mifangaro indrindra amin'ny exchanger hafanana, ny rafi-pandehanan'ny rano ary ny rafitra mpankafy. Ny condenser evaporative dia mifototra amin'ny conduction evaporative sy h sensible h ...Hamaky bebe kokoa »
Tamin'ny 4 martsa 2020, fiaramanidina iray avy any Brezila no tonga soa aman-tsara tany Shanghai, nitondra sarontava 20 000 PFF2 nomen'ny Lianhe Chemical Technology Co., Ltd., ho an'ny Vokovoko Mena Taizhou. Ity no andiany fahadimy amin'ny famatsiana ara-pahasalamana natolotr'i Lianhetech hatramin'ny COVID-19. Ny fipoahan'ny he ...Hamaky bebe kokoa »
Notohanan'ny filankevitra sinoa ho fampiroboroboana ny International Trade Beijing Sub-council, Fikambanan'ny Refrigeration sinoa, ary ny China Refrigeration and Air-Conditioning Association Association, nokarakarain'ny Beijing Internat ...Hamaky bebe kokoa »
Asa vita mafy
Nanatrika ny Shanghai Baoshan ny SPL "Miady amin'ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny valanaretina, hahatratra ny fihaonambe kendrena momba ny toekarena sy ny fampandrosoana 2020" izay nokarakarain'ny governemanta. Nandritra ny fihaonambe, nisy ihany koa ny lanonana valisoa izay notontosaina tamin'ny Top 50 an'ny 2019 Fandoavam-ketra manokana ente ...Hamaky bebe kokoa »